Ukucaciswa kwe-LG V40 ThinQ, efumaneka ngoFebruwari 4 | Iindaba zeGajethi
Kwiminyaka yakutshanje, sibonile ugqatso ngabavelisi ukongeza elona nani likhulu leekhamera kwiitheminali zabo, ukuze kuphuculwe iziphumo ezifunyenwe ngokudibanisa imifanekiso eyahlukeneyo ethathwa yikhamera nganye. Ngale ndlela sinako Fiphaza imvelaphi, wandise i-angle yokujonga kwaye uphucule ubukhali obufanayo.
Umenzi wokugqibela ozibophelele ekwandiseni inani leekhamera kwiiterminal zayo ngumenzi waseKorea uLG, umenzi osandula ukubhengeza ngokusesikweni i-LG V40 ThinQ, i-terminal emele iikhamera ezintathu ezibekwe umva kunye ezimbini ngaphambili. Apha ngezantsi siza kukubonisa zonke iifayile ze- Ukucaciswa kweLG V40 ThinQ entsha.
1 Ukucaciswa kweLG V40 ThinQ
1.1 Isikrini se-LG V40 ThinQ
1.2 Iikhamera ezi-5 zokufota yonke into
1.3 Isandi somgangatho
1.4 Uyilo lwe-LG V40 ThinQ
1.5 Unxibelelwano lwe-LG V40 ThinQ
1.6 Ingqondo yolwazi
2 Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-LG V40 ThinQ
3 Ukuphuculwa kokumiliselwa kweLG V40 ThinQ
Ukucaciswa kweLG V40 ThinQ
Isikrini 6.4 intshi OLED-19.5: 9 ifomathi-isisombululo: 3.120 x 1.440
Imemori yangaphakathi I-128 GB iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-2 TB ngamakhadi e-MicroSD
Imemori ye-RAM 6 GB
Igumbi eliphambili Kathathu: 12MP (f1.5 ukuvula) 78º / 16MP (f1.9 ukuvula) I-angle ebanzi enkulu 107 Super / 12MP (f2.4 ukuvula) iTelephoto 45º (4032 x 3024)
Ikhamera yangaphambili Okwesibini: 8MP (ukuvula f1.9) 80? / 5MP Wide angle 90º (aperture f2.2)
I-Autofocus / Flash Ewe (FF kunye nePDF ezimbini) / i-LED
Isisombululo sevidiyo UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps
Ukuhamba kancinci 240fps @ HD
Ikhamera eyongezelelweyo I-Cinegraph / ifoto kathathu / umboniso kathathu / imo yePortrait / ifoto ye-HDR / Dlala kwaye urekhode i-HDR 10 / imo yeCinema / ukusondeza indawo / imowudi yemanyuwali kwifoto nakwividiyo / 4K ukurekhodwa kwevidiyo ye-Hi-Fi / i-Flash GIF / imo yeXesha leFlash / Idiski yeFlash
Umthamo webhetri I-3.300 mAh iyahambelana nokutshaja ngokukhawuleza
Inkqubo yokusebenza Android Oreo 8.1
Ubukhulu 158.75 × 75.83 × 7.79 mm
U bunzima I-169 gram
Isikrini se-LG V40 ThinQ
I-LG V40 ThinQ isinika isikrini esikhulu se-6,4-intshi, ene-19.5: ifomathi ye-9 kunye nesisombululo se-QHD +, esinokuthi sonwabe kuwo nawuphi na umxholo ukongeza kweyona midlalo yevidiyo inamandla kwintengiso efana neFortnite okanye iPUBG. Ndiyabulela kwiscreen sohlobo lwe-OLED, abantu abamnyama benyulu banikezela ngokuchaseneyo okuqaqambileyo nokubukhali.
Iikhamera ezi-5 zokufota yonke into
I-LG V40 ThinQ yi-smartphone yokuqala yenkampani yaseKorea eneekhamera ezi-5, ezi-3 zangasemva kunye nezimbini ngaphambili. Iikhamera ezintathu zangasemva zisinika ii-engile ezintathu zokwahlula ngokupheleleyo ukuziqhelanisa neemfuno zomsebenzisi:
Ifowuni yekhamera ene-2x zoom zoom
Ikhamera ebanzi enkulu ene-107 yeedigri zokujonga
I-engile ebanzi eqhelekileyo kunye nokuvula f / 1.5
Ngaphambili, sinazo iikhamera ezimbini esinokuthi sithathe ngazo iiselfie ngokungacacisi imvelaphi, zilungele abathandi bolu hlobo lokufota. Ukongeza, kuye kwanjalo Iindlela zembonakalo kunye nemvelaphi yesiqhelo ukuze sikwazi ukuzifumana kuyo nayiphi na ifoto enemvelaphi ecacileyo okanye omnye umfanekiso.
Ikwasinika ukukhanya kwe-3D, isiphumo esivumela ukuba senze ngokwezifiso ukukhanya kunye nemvelaphi yokuthinjwa kwethu okunika ubuchwephesha bobuchwephesha. singayifumana kuphela kwizitudiyo zokufota.
Enkosi ngokusebenzisana kwe-LG neMeriadian, i-LG V40 ThinQ isinika ii-bass ezingenakuthelekiswa nanto, ivolumu, ukuthembeka okuphezulu kunye nesandi sendawo, Into ezinokuthi ziqhayise ngayo ziitheminali ezimbalwa ngaphandle kokongeza izithethi ezingakumbi kwiitheminali zayo.
Uyilo lwe-LG V40 ThinQ
Isiphelo esitsha senkampani ye-LG, sInikwe ngomda wentsimbi ekhatshwa yiGorilla Glass 5 iglasi kwaye okomzuzwana, ifumaneka kuphela ngombala iBlue New Moroccan.
Inayo Isiqinisekiso se-IP68 enikezela ngokuchasana kokubini amanzi kunye nothuli. Kodwa ikwanayo nesatifikethi somkhosi se-MIL-STD esiqinisekisa ukumelana kwayo neemeko ezimbi.
Unxibelelwano lwe-LG V40 ThinQ
Isiphelo sesiphelo se-LG sinika uqhagamshelo lwe-USB-C, i-WiFi ngqo, i-NFC chip, Intloko ye-3,5mm yentloko kunye nonxibelelwano lweBluetooth 5.0
Isiphelo esitsha se-LG sigcina itekhnoloji yobukrelekrele bokulinganisa (ThinQ) le nkampani ibheja kuyo kule minyaka mibini idlulileyo. Ndiyabulela kule teknoloji, abasebenzisi banokulawula nasiphi na isixhobo sasekhaya smart ukongeza kwi yenza i-ecosystem ye-ThinQ yokulawula ukusetyenziswa kwamandla kokubini ngaphakathi nangaphandle kwekhaya, ngaloo ndlela kubonisa ukuzibophelela kwakhe kwindalo yephulo leSmart Green.
Ubukrelekrele bokwenziwa bufunyenwe kwiikhamera, ikhamera ethi enkosi kwisoftware isinika iziphumo zobungcali ezinje ngokuqamba ngobukrelekrele, okwaziyo ukubamba eyona nto siyifunayo. Kwifoto, iipesenti ezingama-90 zayo ziyilwa. Ukuba ukuyila akulunganga, ifoto ayixabisekanga kwaphela.
Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-LG V40 ThinQ
I-LG V40 ThinQ inexabiso lokwazisa lama-euro angama-899. Iya kufumaneka kwintengiso ye- Ivenkile ye-Intanethi yomenzi we-LG ukusukela nge-4 kaFebruwari kwaye ngalo mzuzu ifumaneka kuphela ngombala oMtsha weBlue Moroccan.
Ukuphuculwa kokumiliselwa kweLG V40 ThinQ
Ukubhiyozela ukuba i-LG V40 ThinQ sisiphelo sokuqala esiza kubakho kuphela kwiwebhusayithi ekwi-intanethi ye-LG, Ukuthengwa kwesiphelo esitsha, i-LG isinika i-intshi ye-28 ye-Smart TV exabisa i-euro ezingama-259, Ukulungiselela ukonwabela umgangatho weethelevishini zalo menzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Ukucaciswa kwe-LG V40 ThinQ, efumaneka ngoFebruwari 4